laacib » Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Chelsea Guuldarrada Kala Kulantay Burnley – Kumaa Ahaa Xiddiga Garoonka?
Kooxda Chelsea ayaa ku bilaabatay difaacashadeeda koobka horyaalka Premier League si niyadjab leh ka dib markii ay guuldarro 3-2 ka soo gaartay laacibkii Burnley oo marti ku aheyd Stamford Bridge, iyadoo Blues ay ciyaarta ku dhameysatay iyagoo sagaal ciyaaryahan ah. Kabtankooda Gary Cahill ayaa casaan toos ah qaatay bilowgii ciyaarta, halka Cesc Fabregas isna kaarka cas loo taagay ciyaarta oo 10 daqiiqo ay ka harsan tahay.
Gary Cahill ma yahay daafaca ku haboon inuu Chelsea kabtan u noqdo? Cahill ma ahan ciyaaryahan dhib badan, laakiin sidoo kalena ma ahan nin ku fiican wareysiyada. Waxa uu u mudaa midka iska dhexdhexaad ah, laakiin marka la eego boosaska badan ee uu Azpilicueta ka ciyaari karo iyo qaab ciyaareedkiisa joogtda ah, waxaana habooneyd inuu noqdo hogaamiyaha laacibkii marka loo eego daafaca Ingariiska ee u nugul qaladaadka.